Nanandratra sy nahabe voninahitra ny lalàna i Kristy
"Sitrak'i Jehôvah noho ny fahamarinany ny hahalehibe ny lalàna sy ny hahabe voninahitra azy" Isa. 42:21
Ny lalàna mifehy ny fitondram-panjakan'Andriamanitra dia voasandratra noho ny nahafatesan'ny Zanany Lahitokana. Nentin'i Kristy ny fahamelohan'izao tontolo izao. Naharitra ny fahoriana Izy, satria notohanan'ny herin'Andriamanitra. Nahajoro Izy satria tsy nisy na dia pentim-paharatsiana na fahotana kely monja tao Aminy. Nandresy ho an'ny olombelona Kristy tamin'ny nizakany ny famaizana izay notakin'ny lalàna. Afaka manome ny fiainana mandrakizay ho an'ny olona lzy, no sady nanandratra ny lalàna sy nanome voninahitra izany. — YI, 04 Aogôsitra 1898.
Ny fanahy tsirairay dia manana adidy hanara-dia an'i Kristy, ilay ohatra lehibe ho an'ny taranak'olombelona. Nilaza Izy fa nitandrina "ny didin'ny Raiko". Noheverin'ireo Fariseo fa niezaka nampihena ny fitakian'ny lalàn'Andriamanitra Izy, kanefa ren'ny sofin'izy ireo ny feony nanao hoe: "Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny lalàna na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa: Mandra-pahafoanan'ny lanitra sy ny tany, dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna, na dia litera iray na tendron-tsoratra iray amin'ny lalàna, mandra-pahatanterak'izy rehetra". Mat. 5: 17,18
Tonga teto an-tany i Kristy mba hanandratra sy hanome voninahitra ny lalàna. Tonga Izy mba hankalaza ireo didy tranainy izay efa nomena antsika hatramin'ny voalohany. Noho izany dia ilaintsika ny lalàna sy ny mpaminany. Haintsika ny Testamenta Taloha mba hitarika antsika ho ao amin'ny Testamenta Vaovao. Tsy misolo toerana ny Testamenta Taloha anefa ny Testamenta Vaovao, fa maneho mazava kokoa amintsika ny drafi-pamonjena. Manome lanja ny rafitra fisoronana manontolo sy ny Teny izay efa nomena antsika hatramin'ny voalohany koa ny Testamenta Vaovao. Fankatoavana tanteraka no takina amin'ny fanahy tsirairay, ary ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra izay nambarany dia hahatonga anao hanana firaisana amin'i Kristy (...) Izao no voasoratra momba Azy: "Dia hoy izaho: inty aho tonga, ao amin'ny horonam-boky no nanoratana ahy. Ny hanao ny sitraponao, Andriamanitra ô, no sitrako; ary ny lalànao no ato anatiko". —Sal. 40:7,8YI, 08 Nôvambra 1894.